PDF Readers click here ဆုတောင်းခြင်း နှင့်ပတ်သက်၍ သခင်ယေရှု ၀မ်းနည်းခြင်း အကြောင်း တစ်ရပ်မှာ ဘုရားသခင်က လူ့အလိုကို လိုက်စေ လိုခြင်းအကြောင်း ဖြစ်သည်။ အခြားဘာသာ ၀င်များသည် ဘုရားသခင်အားသူတို့အလိုကို လိုက်စေရန် သွေးဆောင်၊ ဆွဲဆောင်၊ ခြိမ်းခြောက်တတ်သည်။ ဤကဲ့သို့ လုပ်နိုင်ပါက ဘုရားသခင်သည် လူတို့၏ အလိုအတိုင်း လိုက်လျှောက်သည်ဟုယုံသည်။ သို့ရာတွင် ခရစ်ယာန်များ ကိုးကွယ်သော ဘုရားသခင်သည် လူ့အလိုကို လိုက်လျှောက်တော်မမူ၊ ဤကဲ့သို့ ကြိုးစားရန်လည်း မသင့်ဟုသွန်သင်လိုခြင်း ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်အား လူ့အလိုကို လိုက်လျှောက်ရန်လည်း ဆွဲဆောင်ရန် မလိုအပ်ပါ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ဘုရားသခင်သည် လူသားများအတွက် အကောင်းဆုံးသိနှင့်ပြီးသားဖြစ်သည်။
ဤသို့ဆိုသော် လူများသည် အဘယ်ကြောင့် ဆုတောင်းနေကြပါသလဲ? ဆုတောင်းခြင်းဆိုရာ၌ ဘုရားသခင်မသိသေးသောအရာလည်းမဟုတ်၊ စိတ်တော်ကို ပြုပြင်စေလို၍ တောင်းလျှောက်ခြင်းလည်း မဟုတ်ပါ။ ဘုရားသခင်ထံသို့ အကြောင်းကိစ္စတစ်ခုခုတင်ပြဖို့ရန် ကိုယ်တော် မသိသော အရာတစ်ခုမျှမရှိပါ။ စဉ်းစားသောအချက်များသည်လည်း မကြာခဏ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရန် အတွေးခေါင်သူလည်းမဟုတ်ပါ။ ယုံကြည်စဉ်းစားချက်များ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရန် လူသားများမှ အမှန်ကန်ဆုံးကို မသိရှိ မဝေခွဲနိုင်သောကြောင့်သာ ဆုတောင်းရန် လိုအပ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်အတွက် မလိုပါ။ ဤသို့ဆိုသော် ဆုတောင်းခြင်းဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း? ဆုတောင်းခြင်း ဝေါဟာရအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့် “တောင်းခြင်း” ကလွမ်းမိုးပြီး “တောင်းလျှောက်ခြင်း” ဖြင့်စွဲမှတ်တတ်ပေသည်။ ဆုတောင်းခြင်း၌ “တောင်းလျှောက်ခြင်း” သည် တစ်ချက်အနေဖြင့် ပါဝင်ခြင်း သာဖြစ်ပြီး၊ သို့တိုင်အောင် တောင်းလျှောက်ခြင်းတစ်ခုတည်းနှင့် မပြီးပါ။ ဆုတောင်းခြင်းဆိုသည်မှာ “ဘုရားသခင်နှင့် စကားပြောခြင်း” “မိတ်ဆွေဖွဲ့ခြင်း” သည် အဓိကဖြစ်ပါသည်။ ဤအရာကို အဆိုတော် Fanny J. Crosby က အောက်ပါအတိုင်း ပြည့်ပြည့်စုံစုံ စပ်ဆိုထားသည်။
စာတစ်စောင်ရေးသောအခါ လိပ်စာရှင်၏ လိပ်စာအရင်ဦးဆုံးရေးသကဲ့သို့ ဆုတောင်းရာ၌လည်း လိပ်စာ တိကျမှန်ကန်ဖို့လိုသည်။ ဖြစ်ရမည်မှာ “ငါတို့၏ အဖ၊ ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိသော” ဟုရေးသင့်သော်လည်း “ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသော ငါတို့၏အဖ” ဟုဆုတောင်းလေ့ရှိသည်။ ဆုတောင်းသူ၏ နာမည်နှင့် စာအိတ်ပေါ်၌ ရေးရမည့် လိပ်စာနှင့် စရခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ ၂။ ဘုရားသခင်နှင့်ပတ်သက်သောအရာများ
ကျွန်ုတို့ပြစ်မှားသော အပြစ်များကို အကျွန်ုပ်တို့သည် လွှတ်သကဲ့ သို့ ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များကိုလည်း လွှတ်တော်မူပါ။
အပြစ်သွေးဆောင်ရာသို့ မလိုက်ပါစေပဲ၊ မကောင်းသောအမှုအရာ မှ ကယ်နှုတ်တော်မူပါ
အဘ= “အဘ” ဆိုသော စကားသည် ခရစ်ယာန်ဘာသာ၌ ချိုသာ၍ ဘုရားသခင်နှင့် နီးစေသော စကားဖြစ်သည်။ အာဖရိကတိုက်ရှိ လူသားစား အမြောက်အများက ဘုရားသခင်သည် ချစ်ခြင်းမေတ္တာ ဖြစ်၍ အဘနှင့်တူကြောင်းနားလည်သောအခါ “ဘုရားသခင်၏သားများ” ဖြစ်လာသည်။ “အဘ” ဆိုသော စကားသည် ဖေါ်ပြသော ဘုရားသခင်၏ အဝေး၌ရှိ ဘုရားသခင်၏ ဂုဏ်အသရေပေါ်လွင်ရန် အသုံးပြုသော “ကောင်းကင်” နှင့် ညီတူညီမျှဖြစ်အောင် ဖန်တီးပေးသည်။ အလွန်ဝေးလံသော ကောင်းကင်နိုင်ငံရှိ ဘုရားသခင်သည် ငါတို့နှင့် အတူရှိသော “အဘ”ကဲ့သို့ အနီးအပါး၌ရှိသော ဘုရားသခင်ဖြစ်ကြောင်း၊ ငါတို့နှင့် အတူရှိကြောင်း (Immanence) ကိုဖော်ပြသည်။ လူသားတို့က ဘုရားသခင်အပေါ် အမြင်မှာ ဓမ္မဟောင်းရှိ ကမ္ဘာဦးကျမ်းမှ တဖြည်းဖြည်းတိုးတက်လာပြီး၊ အထွတ် အထိပ်၌ “ချစ်သောအဘ” ကဲ့သို့ မြင်တွေ့နိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဤ ကဲ့သို့ မြင်နိုင်ရန် သခင်ယေရှုကလည်း သွန်သင်တော်မူသည် (လုကာ ၁၅း ၁၁-၂၄)။ ဘုရားသခင်ကို “အဘ” ဟုခေါ်နိုင်မှာသာလျှင် သူဖန်ဆင်းသော ကမ္ဘာသူကမ္ဘာသားအားလုံးကို “ညီ” ဟုခေါ်ဆိုနိုင်မည်ပင်။ နိုင်ငံတော်တည်ထောင်ပါစေသော
This entry was posted on April 27, 2011 by thawngno in Articles Bible Study, Articles Christian Life, Rev. Dr. Simon Pau Khan En and tagged Prayer, Rev. Dr. Simon Pau Khan En.	Shortlink